Faahfaahin: Dilka madaxwaynihii hore ee dalka Yemen oo la xaqiijiyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Faahfaahin: Dilka madaxwaynihii hore ee dalka Yemen oo la xaqiijiyay
Faahfaahin: Dilka madaxwaynihii hore ee dalka Yemen oo la xaqiijiyay
Yemen's former President Ali Abdullah Saleh speaks during a ceremony marking the 35th anniversary of his General People's Congress party (GPC) establishment in Sanaa, Yemen, Thursday, Aug. 24, 2017. The (GPC) was founded in August 24, 1982 led by former Yemen's President Ali Abdullah Saleh during his 33 years rule until he stepped down from power after last year's protests. (AP Photo/Hani Mohammed)
Kooxda Xuuthiyiinta dalka Yemen, ayaa sheegay in dagaal iyo duqayn maanta oo Isniin ah ka dhacay Magaalada Sanca ee xarunta dalka Yemen lagu dilay Madaxweynihii hore ee dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax.
Warbaahinta ku hadasha kooxda dalka Iiraan laga taageero ee Xuuthiyiinta ayaa baahiyay geerida Cali Cabdalla Saalax.
Warbaahinta Caalamiga ah, oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka ee fadhigeedu yahay dalka UK ee Reuters, oo soo xiganaysa saraakiisha sar sare ee xisbiga General People’s Congress ee uu lahaa Madaxwaynihii hore Yemen, ayaa sheegtay in loo xaqiijiyay dhimashada Cali Cabdalla Saalax.
Reuters, waxaa ay qortay in loo xaqiijiyay in Madaxwaynihii hore lagu dilay meel u dhow magaalada Sanca.
Muuqaal video oo lagu baahiyay barraha bulshada, ayaa waxaa lagu arkay meydka nin u eg Cali Cabdalla Saalax, xilli taageere-yaasha Xuuthiyiinta ay meydka ninkaasi ku soo wareejinayeen wadooyinka Sanca.
Xuuthiyiinta, ayaa sheegay in Cali Cabdalla Saalax, uu dhintay ka dib markii ay qarxiyeen gurigiisa oo ku yaala magaalada Sanca.
Goor sii horaysay, Xisbiga GPC, ayaa beeniyay sheegashada xuuthiyiinta ee Ku aadan dilka Madaxwaynihii ugu xilliga dheera ee dalka Yemen.
Kooxda Xuuthiyiinta reer Yemen, ayaa la wareegay inta badan Magaalada Sanca, markii ay magaalada dhinac uga saareen ciidamadii Cali Cabdalla Saalax, iyadoona uu dagaalku xilligan uu yahay mid wali ka socoda duleedka magaaladaasi.
Telfiishanka AlJazeera, laantiisa afka Ingiriiska ayaa sheegtay in sidoo Kale loo xaqiijiyay dilka Cali Cabdalla Saalax.
Waxaa aan shaki Ku jirin geerida xoghayaha xisbiga xisbiga (GPC) Yaasir al-Cawadi uu geeriyooday.
Waxaa sidoo Kale lagu waramay in la dilay madaxa ciidamada Madaxwaynihii hore.
Dalka Yemen, oo ah dal dagaallo, Cuduro iyo jahwareer siyaasadeed ay hareeyeen tan iyo 2015-kii ayaa dilka Cali Cabdalla Saalax waxaa uu noqon karaa mid sii murjin kara heer-kuulka siyaasadeed iyo midda bani’aadanimo ee haatan ka taagan dalkaasi.
Maalmo ka hor Saalax, ayaa sheegay diyaar in uu u yahay in wada hadal uu la furo xulafada Sacuudiga uu hogaamiyo, kuwaasi oo dagaal kula jira Xuuthiyiinta iyo ciidamada daacadda u ah Madaxwaynihii hore, isagoo horay xiriira dhow la lahaa dowladda Sacuudiga, sidoo kale cadow xun ay isku ahaayeen xuuthiyiinta dowladda Iiraan ay taageerto.
Xulafada Sacuudiga, ayaa soo dhaweeyay hadalka Cali Cabdalla Saalax. Qoraal ay soo saareen, ayay ku sheegeen in go’aankani uu yahay mid lagula safanayo rabitaanka bulshada reer Yemen, bulshadana laga dulqaado Jabhadda Xuuthiyiinta.
Hase ahaatee, hogaamiyaha Xuuthiyiinta, Cabdul Malik al-Xuuthi ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid laga xishoodo islamarkaana Mr. Saalax uu khiyaano adag ku kacay.
Dadka ka faallooda xaaladda Barriga dhexe ayaa geerida Cali Cabdalla Saalax Ku tilmaamay mid aargoosi ah.
Dalka Yemen, ayaa ah dal ku yaala gacanka Carabta, waana dalka ugu saboolsan dunida Carabta
Previous articleCommuniqué: Somali security conference in Mogadishu
Next articleKacdoon ka dhan ah Xuuthiyiinta oo lagu baaqay iyo 125 qof oo ku dhintay dagaal ka dhacay Sanca